ပရိသတ်တွေနဲ့ကြည်နူးဖွယ်ရာတွေ့ဆုံပွဲလေးမှာပျော်ရွှင်ခဲ့ရကြောင်းမျှဝေလိုက်တဲ့ ပန်းရောင်ခြယ် - Cele Gabar
အသံချိုချိုလေးနဲ့အချစ်သီချင်လေးတွေသီဆိုတတ်တဲ့ အဆိုတော်မလေးပန်းရောင်ခြယ်ကိုတော့ သိကြမှာပါ။နာမည်ကျော်အဆိုတော် ဂရေဟမ်ရဲ့သမီးလေးလည်းဖြစ်ပြီး အနုပညာမျိုးဆက်သစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူလိုပဲအနုပညာအရည်အသွေးကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကိုရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ပွဲအခမ်းအနားတွေမှာ သီချင်းဆိုတာ ပွဲတက်ပေးတာတွေအပြင် နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။သိပ်မကြာသေးခင်ကလည်း Canal + ရုပ်သံလိုင်းကနေ ပန်းရောင်ခြယ်ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကို စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေလည်းရထားတာပါ။
ဇာတ်လမ်းတွဲနာမည်က “လိပ်ပြာ-အမှန်တရားရဲ့ဓားတစ်လက်” ဖြစ်ပြီး အဓိဇာတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ လိပ်ပြာလေးရဲ့ Fan Meeting ကိုလည်းလှည်းတန်းစင်တာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေနဲ့ပျော်ခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့အတူ လာရောက်ပေးခဲ့တဲ့ အောင်ရဲထိုက်နဲ့ခါရာတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။လိပ်ပြာလေးလည်း နောက်ထပ်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာရိုက်ကူးပြီး ပရိသတ်ကိုခံစားမှုရသကောင်းတွေပေးစွမ်းနိုင်ပါစေ….
Source : PanYaungChel
အသံခ်ိဳခ်ိဳေလးနဲ႔အခ်စ္သီခ်င္ေလးေတြသီဆိုတတ္တဲ့ အဆိုေတာ္မေလးပန္းေရာင္ျခယ္ကိုေတာ့ သိၾကမွာပါ။နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္ ဂေရဟမ္ရဲ႕သမီးေလးလည္းျဖစ္ၿပီး အႏုပညာမ်ိဳးဆက္သစ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ဖခင္ျဖစ္သူလိုပဲအႏုပညာအရည္အေသြးေကာင္းေတြပိုင္ဆိုင္ထားတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မႈကိုရရွိထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ပြဲအခမ္းအနားေတြမွာ သီခ်င္းဆိုတာ ပြဲတက္ေပးတာေတြအျပင္ နာမည္ႀကီးအမွတ္တံဆိပ္ေတြနဲ႔လက္တြဲၿပီးအလုပ္လုပ္ေနတာကိုျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။သိပ္မၾကာေသးခင္ကလည္း Canal + ႐ုပ္သံလိုင္းကေန ပန္းေရာင္ျခယ္ဦးေဆာင္ပါဝင္ထားတဲ့ဇာတ္လမ္းတြဲကို စတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။သ႐ုပ္ေဆာင္အေနနဲ႔ပထမဆုံးဇာတ္လမ္းတြဲျဖစ္သလို သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းမြန္တယ္ဆိုတဲ့မွတ္ခ်က္ေတြလည္းရထားတာပါ။
ဇာတ္လမ္းတြဲနာမည္က “လိပ္ျပာ-အမွန္တရားရဲ႕ဓားတစ္လက္” ျဖစ္ၿပီး အဓိဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ လိပ္ျပာေလးရဲ႕ Fan Meeting ကိုလည္းလွည္းတန္းစင္တာမွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ပရိသတ္ေတြနဲ႔ေပ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ္ေတြနဲ႔အတူ လာေရာက္ေပးခဲ့တဲ့ ေအာင္ရဲထိုက္နဲ႔ခါရာတို႔ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းဆိုထားပါတယ္။လိပ္ျပာေလးလည္း ေနာက္ထပ္ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာ႐ိုက္ကူးၿပီး ပရိသတ္ကိုခံစားမႈရသေကာင္းေတြေပးစြမ္းႏိုင္ပါေစ….
“ဘဝနောက်ကြောင်းသိသူတွေ မျက်ရည်မဆည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဘင်ဂျမင်ဆုမ်းရဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေမှု”